आर्थिक र सामाजिक रुपान्तरण हाम्रो मुख्य उद्धेश्य होः सुमित केडिया (भिडियोसहित) - सुनाखरी न्युज
२०७७ मंसिर २१ , आइतवार
आर्थिक र सामाजिक रुपान्तरण हाम्रो मुख्य उद्धेश्य होः सुमित केडिया (भिडियोसहित)
Posted on: November 13, 2020 - 3:23 pm
सुमित केडिया/ युवा उद्यमी-
यतिबेला उद्योग वाणिज्य महासंघको चुनावको माहोल बढेको छ । प्यानल घोषणा गरेर महासंघका उमेद्वारहरु प्रचार प्रसारमा व्यस्त छन् । नेपाल डेरी एसोसियशन नेपालका पूर्व अध्यक्ष तथा नेपाल गोकुल मिल्क प्रालिद्धारा सञ्चालित सिताराम डेरीका सञ्चालक सुमित केडियापनि बिरामीपछि तंंग्रिएर चुनाव प्रचारका लागि टिममा जुटेका छन् । वर्तमान कार्यसमितिमा समेत आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिरहेका केडिया अहिलेको कार्यकालको अनुभव र हिम्मतले गर्दा निजी व्यवसायीको समस्या र मुद्दालाई अगाडि बढाउने विश्वासका साथ फेरि महासंघको वस्तुगत संघतर्फ कार्यकारी सदस्यका लागि मैदानमा छन् । नेपालकै स्थापित ब्यापारिक घरानाका सदस्य समेत रहेका केडियाले वर्तमान कार्यसमितिमा उद्योग वाणिज्य महासंघमा वस्तुगत समितिमा सह–सभापतिको रुपमा काम गरिसकेका छन् । उनीसँग सुनाखरी न्युज डट कम (www.sunakharinews.com) का लागि शिव दुवाडीले गरेको कुराकानीको संक्षेप ।
उद्योग वाणिज्य महासंघको चुनावी अभियानमा लाग्नु भएको छ । कस्तो छ मुलुकको अहिलेको उद्योग ब्यवसायको अवस्था ?
कोरोना संक्रमण नेपालका लागि मात्रै नभएर विश्वकै लागि फरक र नौलो अनुभव रह्यो । अहिले विश्व नै कोरोना भाइरससँग जुधिरहेको छ । हुन त हामीले नेपालीले यस अघि पनि भूकम्प र नाकावन्दी जस्ता विपत्ति भोगिसकेका थियौ । तर यो भाइरस अझ व्यापकरुपमा आयो । डेरीको क्षेत्रमा उनको अनुभव निक्कै अघिदेखिको हो । मैले विगतदेखि नै यहि विषयमा आफ्नो सुझाव र त्यही अनुसारको गतिविधि गर्दै आएको छु । मेरो कामको मुल्यांकनको आधारमा र मैले देखाउँदै आएको सक्रियतालाई आधार मानेर साथीहरुले यो पटक पनि मलाई साथ दिनु हुन्छ भन्ने पूर्ण विश्वास छ ।
कोरोना संक्रमण नेपालका लागि मात्रै नभएर विश्वकै लागि फरक र नौलो अनुभव रह्यो । अहिले विश्व नै कोरोना भाइरससँग जुधिरहेको छ । हुन त हामीले नेपालीले यस अघि पनि भूकम्प र नाकावन्दी जस्ता विपत्ति भोगिसकेका थियौ । तर, यो भाइरस अझ व्यापकरुपमा आयो । कोरोना संक्रमण सुरु भएपछि यसको अन्त्य कहिले होला भन्ने निश्चित नभएका कारणले पनि होला यसको त्रास आममानिसमा धेरै नै छ । मेरो अनुभवमा कोरोनाको संक्रमणयता नेपालीको क्रयशक्ति एकदमै घटेको छ ।
मैले सवै खालमा सुरक्षाका उपाय अपनाउँदा अपाउँदै म संक्रमित हुन पुगें । मेरो सिटि काउण्ट २८ आएको थियो । म घरैमा आइसोलेशनमा बसें । त्यसवेला आइसोलेशनमा वस्दा आत्मबल बढाउन आवश्इक रहेछ । त्यतिवेला डषइटहरु पनि बढी आवश्यक पर्ने रहेछ । त्यति भएपछि डराउन चाँदी नपर्ने रहेछ ।
मानिसहरुमा पहिलेजस्तो मन खोलेर खर्च गर्ने वातावररण छैन र चाँहदैनन् पनि । चैतमा लकडाउन भएयता नै २ खर्ब भन्दा बढिको क्षति भइसकेको छ । १६ लाखभन्दा बढिले रोजगारी गुमाइसकेका छन् । आर्थिक वृद्धि शून्यमा पुग्ने अवस्था छ । हरेक क्षेत्रमा यसको प्रभाव परेको छ । अवस्था एकदमै नाजुक बनेको छ । यो जटिल अवस्थामा अब सरकारले अविभावकको भूमिका खेल्नु पर्छ । निजी क्षेत्र कमजोर भएको यो समयमा निजी क्षेत्रलाई अघि सारेर भोलीका लागी राम्रो गर्न पनि सरकारले तत्परता देखाउने बेला यही हो ।
कोरोनाले सबै क्षेत्रमा असर पारको सर्वविदितै छ । डेरी उद्योग पनि यसबाट मुक्त हुन सकेको छैन । सामान्यरुपमा हेर्दा अत्यावश्यक क्षेत्रमा रहेको दुग्धजन्य पदार्थमा कुनै असर छैन होला जस्तो लाग्छ । तर कोरोना संक्रमण सुरु भएपछि ठप्प बनेको सामाजिक गतिविधिका कारण होटेल, रेष्टुरेन्ट, पार्टी प्यालेसहरु सबै बन्दकै अवस्थामा छन् । दुग्धजन्य पदार्थ बढि खपत हुने यस्ता स्थानहरु बन्द हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर दुग्धजन्य पदार्थको खपतमा परेको छ । यससँग सम्बन्धित २० प्रतिशत उद्योग मात्रै अहिले सञ्चालनमा छन् । मेरै गोदाममा पनि ७, ८ करोड रुपैयाँ बराबरको धुलो दुध र बटर थन्किएको छ । यसबाटै थाहा हुन्छ कोरोनाले यो क्षेत्रलाई कति असर पारेको छ भनेर ।
अहिले व्यापारको वैकल्पिक उपायको बारेमा पनि थुप्रै चर्चा भइहरेको छ । कोरोनालाई अवसरको रुपमा लिएर हामीले यो वैकल्पिक उपाय अवलम्वन गर्न सक्छौ । फुडमाण्डू लगायतका डेलिभरी व्यवसायमा संलग्न केही समूहहरुसँग कुरा पनि भयो तर अझै पनि यो सिस्टममा व्यवसाय गर्दा वितरणको समस्या देखियो । उहाँहरुमा रेफ्रिजेरेटरको समस्या छ । दुग्धजन्यज पदार्थ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ लैजान रेफ्रिजेरेटरको व्यवस्था नभए बिग्रन सक्ने सम्भावना अधिक हुन्छ । तर पनि हामी वैकल्पिक वितरणको उपायको खोजीमा रिसर्च गरिरहेका छौं।
यहाँ त डेरी क्षेत्रको मान्छे । के छ यो क्षेत्रको शुधारको योजना ?
नेपालको डेरि क्षेत्रको सुधारका लागी केही विषयहरुलाई जिम्मेवारीपूवर्क पुरा गर्नुपर्छ । गोठदेखि ओठसम्म राम्रो बनाउन क्वालिटीमा सुधार हुनु पर्छ । दुग्धजन्य पदार्थमा सुधार हुनु पर्छ र यसको अनुभूति आम उपभोक्तालाई दिनुपर्छ अनि मागको दायरालाई अझै बढाउनु पर्छ । यति गरेको खण्डमा नेपालको डेरी क्षेत्रमा थप सुधार आउँछ ।
धेरै ब्यवसायी चुनावी अभियानमा लाग्नु भएको छ । ती धेरै ब्यवसायिको भिडवाट यहाँलाई नै किन रोज्ने ?
मलाई किन चुन्ने भन्ने विषयमा म साथीहरुलाई के स्पष्ट पार्न चाहन्छु भने मेरो अघिल्लो कार्यकालको अनुभवको आधारमा मैले नीजि व्यवसायीको पीडा र समस्यालाई राम्रोसँग बुझेको छु । र, उद्योग वाणिज्य महासंघले यस विषयमा के कसरी भूमिका खेल्न सक्छ भन्ने पनि नजिकबाट नियालेको छु । यसैको आधारमा मैले निजी क्षेत्र र सरकारवीच ब्रिजको काम गर्ने गरी मेरो एजेण्डा तय गरेको छु । नीजि क्षेत्रको उत्थानको साथै सरकार र देशलाई पनि प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने गरीका योजना र सुझाव अग्रजहरुलाई दिने गरी म आफ्नो एजेण्डामा लाग्नेछु ।
सुत्केरीको ब्यथा सुत्केरिलाई नै थाहा भएजस्तै ब्यवसायीको दुःख त्यही क्षेत्रमा लागेका ब्यवसायीलाइ नै थाहा हुन्छ । मैलै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वस्तुगत परिषदमा सदस्यको हैसियतले कामगर्दा ब्यवसायिको पीडालाई सुक्ष्मरुपले श्लिेषण गर्ने मौका पाए । त्यसको अनुभववाट मनलाइ के लाग्छ भने एक्लै केही गर्न सकिँदैन । सामुहिक प्रयासवाटठ गर्ने हो । त्यसकलाागि एउटा हिस्सा हुन सक्यो भने मैले पनि ब्यवसायी साथिहरुकालािग केही गर्न स्क्छु भन्ने मलार्य लाग्छ ।
महासंघ भनेको नीतिगत रुपमा उठेका बिषयहस्तुहरुलाई सम्वन्धित तहमा पु¥याएर त्यसलाई निश्कर्षमा पुर्याउने संस्था हो । नीतिगत तहका बिषयवस्तुहरुलाई मात्रै सम्वन्धित तहमा पुयाएर त्यसलाई सम्वोधन गर्न मात्रै सक्यौ भने धेरै समस्या अपाmै हल हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ । महासंघको यति लामो गैरवशाली इतिहासमा छ । म पनि त्यसको एउटा हिस्सा हुनसकेमा पक्कैपनि त्यसले सवैलाई फाइदा गर्छ भन्ने मलाई लागेृको छ ।
सुरुमै भने मेरो अघिल्लो कार्यकालको अनुभवको आधारमा म नीजि व्यवसायीयको समस्या र मुद्दासँग परिचित छु । त्यसैले पनि यो कार्यकालमा म त्यहाँ पुगेको अवस्थामा म झन बुलन्दरुमा हाम्रा माग आवाजलाई अगाडि बडाउन सक्छु यसकारण पनि साथीहरुले मलाई मत हाल्नु पर्छ र फेरि मौका दिनु हुन्छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु ।
यहाँको विचारमा निजी क्षेत्रमा अहिले के कस्ता चुनौति र अवसर छन् ?
राम्रो प्रश्न गर्नुभयो । विगत सात÷आठ बर्षमा धेरै समस्या देखिए । २०७२ को भूकम्प, त्यसलगत्तैको नाकाबन्दी र हालको कोभिडको समस्या आए । कोभिडले मान्छेको क्रयशक्ति घटाउने कम गर्यो । बजारमा जुन डिमाण्ड हुनुपर्ने थियो, त्यो भएन । पर्यटन क्षेत्र धराशायी वनेको छ । भएका उद्योग ब्यवसाय ३०-३५ प्रतिशत क्षमतामा चल्नुपर्ने अवस्था आयो । यो अवस्थामा सवै उद्योगहरुमा चालु पुँजीको समस्या भएको महशुर हामीले गरेका छन् । चालु पुँजी नै कम हुँदा तलवभत्ता, ज्यादा जस्ता कुराहरु कसरी ब्यवस्थापनगर्ने भन्ने चुनैति देखिएको छ । सरकारले यस्तो वेलामा अभिभावककोरुपमा हेर्नु पर्दछ । सवै ब्यवसायीलाई ढाडसि दिने काम सरकारको हो । कोभिडकाकारण म आफैं संक्रमति हुन पुगेँ । यो बीचमा म पनि प्रत्येकदिन उद्योग पुगें । नजान पनि सकिन्थ्यो, तर म दुधजन्य ब्यवसायमा लागेको मान्छे, सवैकलागि म आफैं खट्न आवश्यक ठानें मैले । सवैलाइ सेवा दिनुपर्दछ भन्ने लाग्यो । यस्तो वेलामा मौद्रिक नीतिमा पनि केही कुराहरु आए । तर, त्यो पर्याप्त छैन । चालु पुँजीकालागि राइस्तरवाटसम्वोधन हुन जरुरी छ ।
निजी क्षेत्रले चाहेको के हो ?
निजी क्षेत्रले अहिले चाहेको मुख्य दुई वटा कुरा हो । हिले बजारमा सामानको माग भैरहेको छैन । अर्को बजारको माग क्रियटगर्न बजारमा गुमेको बिश्वासलाई फर्काउनपर्ने छ । यसकालागि राज्इले पहल गर्नुपर्ने हुन्छ । म दुग्घ ब्इवसायमा लागेको मान्छे । अहिले मुश्किलले २५ प्रतिशत पयिन ब्यवसायच चलेको छैन । होटल, रेष्टुरेण्ट, विद्यालय सवै बन्दछन् ।कोभिड लाग्लाकी भन्ने त्रास ब्यापक छ । यसका सरकारले चिन्ता नगर्नुस, हामी छौं भन्न्े ख ालको सन्देश दिन जरुरी छ । अर्को कुरा मानिसको क्रयशक्ति पनि घटेको छ । यसले पनि समस्इा पारेको छ ।
नेतृत्वमा पुगेपछि अहिले देखिएको समस्या समाधानकालागि के कस्ता योजना छन् ?
यसमा हामी एक्लैले काम गर्ने होइन । हामीसँग पर्यटन, उद्योग, उर्जा, सेवा लगायतका क्षेत्र छन् । यी सवै क्षेत्रमा समस्या छन् ।मामी मिलेर सामुहिकरुपमा यी समस्इाहरुलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले निर्वाचनको माहोलनमा पक्ष विपक्ष हुनु सामान्य हो । निर्वाचन पश्चात हामी एक भएर अगाडि बढ्छौं । त्यसतिवेला मनमुटाव हुँदैन । अहिले निर्वाचनकाक्रममा पक्ष विपक्ष देखिएप्छि निर्वाचन पछि सवै एकजुट हुनै पर्दछ । विगतमा पनि यसतो हुन्थ्यो ।
टिम वनाउन आश्यक थियो ?
चुनावी माहोलमा पक्ष विपक्ष र तर्फ वितर्क हुनु स्वभाविक हो । म अहिले चन्द्र ढकाल र उमेशलाल प्रधानको पटममा छु । रामचन्द्र संघाई, गुणनिधी तिवारी लगायका ब्यक्ति हाम्रो टिममा हुनुहुन्छ । यद्यप्ी यो वा त्यो टिकमा भन्दा पनि म आफूलाई एएटा प्रोफेशनल भन्न रुचाउँदछु । मन मिल्यो भावना मिल्यो त्यही कारण अहिले हामी यसरी टिममा मिलेर गएका हौं । यसमा पुरारनो सम्वन्ध र निकटता पनि छ ।
महासंघका कसो नेतृव आवश्यक छ ?
वुढापाकाको अनुभव र युवाको उर्जालाई मिश्रितरुपमा लैजानु पर्दछ । त्यसले देश विकाशमा सहयोग पुर्याउँदछ भन्ने मलार्य लाग्दछ । नयाँ नेतृत्व आएप्छि सवै बयवसायी मिलेर अहिले देखिएका ससससससवै समस्इा समाधान गर्न तर्फ हामी लाग्नु पर्दछ । हामी नै त्यो ठाउँमा पुगेको अवस्थामा हामी आइ सकेपछ िहाम्रो मुख्य जोड भनेको नीीतगत शुधारमा हुनेछ । यसकालागि हामी लागि पर्नेछौं । नीतगतरुपमा शुधार भएका धेरै समस्या आफैं समाधान हुने हाम्रो अपेक्षा छ ।
अन्त्यमा आम ब्यवसायीलाई यहाँको सल्लाह सुझाव र आग्रह के छन् ?
सर्वप्रथप म दीपावलीको शुभकामना दिन चाहन्छु । अर्को कुरा भनेको कुनैपनि कामगर्दा दृढ आत्मवलको साथ अगाडि बढ्नु पर्दछ । त्यो भयो भने पक्कैपनि सफलता हात लाग्दछ । निर्वाचन पछि सवै ब्यवसायी एक भएर अगाडि बढ्नु पर्दछ । र मुलुकको अर्थतन्त्रको समृद्धिकालागि ब्यवसायी एक भएरु अगाडि बढ्नु पर्दछ । धन्यवाद ।
हाम्रो टिमको जित सुनिश्चित छ: अञ्जन श्रेष्ठ
अर्थतन्त्र पुनः स्थापित हुन्छ सबैले मिहिनेत गरौँः अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल
© 2015 - 2020 Sunakhari News Pvt. Ltd.